Memo indlela yokukhulisa izipikili ngokushesha
Iphupho kwanoma iyiphi intombazane iyisipikili esihle, esinebushelele futhi esinempilo. Kodwa, ngeshwa, imvelo ayinikezwa ngalesi simangaliso. Yini okufanele uyenze ezimweni ezinjalo? Ukuze ukhule, qaphela futhi uvikele. Njalo umbuzo wesithathu ubuza ukuthi ungakhula kanjani izipikili ngokushesha, futhi uqine? Kunezindlela eziningana eziphumelelayo.
Okokuqala, udinga ukulungiselela ukukhulisa izipikili. Into ebaluleke kakhulu ukuyeka ukulutha okulimazayo nokulimazayo. Njengokubamba izingodo, isibonelo. Futhi u-burrs naye. Kumele futhi ugweme ukubhema nokuphuza utshwala. Zonke lezi zinto zinomthelela omubi emzimbeni (nakuzipikili nazo). Ngaphezu kwalokho, udinga ukuhlala ukudla okunomsoco. Okushoyo ukushiya imikhiqizo eyingozi, hhayi ewusizo. Indlela yokukhulisa izipikili ngokushesha? Faka ekudleni kwemikhiqizo yobisi, ngokwemvelo uma kungenzeka. Bacebile nge-calcium, ngaphandle kwesakhiwo sezinzipho ezingenakwenzeka. Ngokwemvelo, ngenxa yokulinganisa okungcono, kubalulekile ukufaka izithelo nemifino ecebile nge-cellulose kanye nama-microelements ohlelweni lokudla okunomsoco nsuku zonke.
Uma umbono wakho wezwe ngokudla nemikhuba ushintsho, ungaqhubeka emabhati. Ngaphambi kokuba uthole indlela yokukhulisa izipikili zakho ekhaya, iya salon ukuze uthole umuthi osebenzayo. Vumela okokuqala ukuphatha iminwe yenkosi. Wonke amabhati angahle ayenze ekhaya eyedwa. Kunezinhlobo zokupheka eziningi zokukhulisa izipikili zakho ngokushesha, ngaphandle komzamo omkhulu. Okulula ukunikeza izipikili ngokwanele iodine. Ngendlela ngayiphi indlela? Faka isicelo ngobusuku obukhulu nge-discton disc epulini yemvelo. Kungcono ukwenza lokhu emva kokugeza kwe-iodine (amanzi afudumele + amaconsi ambalwa we-iodine).
Konke umsebenzi wesikole kufanele kwenziwe, ukuvikela izandla. Akusize ngalutho ngale njongo kwavela amagilavu. Kuyinto efiselekayo ukunciphisa ukuxhumana namanzi kanye namakhemikhali asekhaya kuze kube ncane. Ekuseni, ungenza isitsha esinomsoco, nge-massage elula yezandla. Amaconsi ambalwa amafutha e-olanti nosawoti azokuvuselela ama-marigolds akho futhi uzilungiselele usuku olusemsebenzini lomsebenzi.
Ungasebenzisa ngokuphepha futhi izinhlobo ezihlukahlukene ze-hardener. Uma uhlela i-manicure nge-varnish ekhanyayo, ke unakekele isisekelo sayo. Kusihlwa, konke ubuhle kungcono ukudubula. Uma kungenjalo, amabhati okugeza angenzi lutho. Ngaphezu kwe-iodine, ungenza ngaphambi kokuthi ulale ugibele ekumuneni kwe-chamomile. Lokhu kuzokhipha ukukhathala kusuka iminwe yakho, gcwalisa izipikili zakho ngamavithamini. Ungasho ukuthi lokhu kuyilungelo lokuvimbela izifo ze- nail.
Indlela yokukhulisa izipikili ezinempilo? Ungakhohlwa ukwenza manicure ngesikhathi! Susa i-cuticle kangcono ngezindlela ezikhethekile ukunciphisa ubungozi bokutheleleka. Ukuze ukupihla izipikili kuyadingeka uma kudingeka ukuze uqinisekise ukukhula okulungile. Lezi zibopho zilula, hhayi zensimbi. Indlela yokukhulisa izipikili ngokushesha? Yenza i- manicure ye - hardware, isibonelo. Kuphephile, kuyasebenza futhi kulula. I-European izokwenza okufanayo. Kodwa kungcono ukwenqaba ukuhlela. Ukunciphisa ingozi yezifo nezifo, ngokushesha izipikili ziyokhula. Ukudla okunempilo, ukungabi nemikhuba emibi nezinqubo zezinsipho - isibambiso sezipikili ezinhle neziphilile.
Indlela yokudala manicure ngephephandaba
Ubuchwepheshe bokusebenzisa i-gel-varnish kulula
Izipikili ezihlaza okwesibhakabhaka: imibono ye-manicure, ukuklama nezincomo
I-JCB (i-forklift): izincazelo
Izinhlelo Mathematical - indlela eqinisekile wenze izinqumo ezingcono kakhulu
Umlaza of Capricorn lasendulo futhi engaqondakali
Kungani ukudonsa esiswini ephansi ngesikhathi sokukhulelwa?
Lapho amawolintshi sikhule kulokho izwe?